mudaharaadyo maalintii sadexaad ka socda wolaita Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA mudaharaadyo maalintii sadexaad ka socda wolaita Itoobiya
Ka dib maalin maalinle ah oo shalayto, xiisad ayaa mar kale ka kacaysa magaalooyinka Boditi iyo Gununo ee aagga Wolaita, ee SNNPRS. Waxay ka dambaysay wararka xanta ah ee ku saabsanaa qaab-dhismeedka cusub ee gobolka ka dib markii la xirey mas’uuliyiinta Zones Axadii lasoo dhaafay, sida laga soo xigtay Nebiyu Marqosa, kaaliyaha macallinka wax ka dhiga dugsiga sharciga ee Jaamacadda Sodo.
Nebiyu wuxuu sheegay in macluumaadka ku wareegaya dhowr meelood oo sheeganaya in aaga Wolaita lagu dari doono qorshe maamul goboleed cusub oo ku saleysan magaalada Arbaminch iyadoo caasimada cusub ay kicisay banaanbaxyo cusub.
Wareysi lala yeeshay telefishanka dawladda shalay, Alemayehu Bawdi, madaxa xafiiska nabadgelyada iyo nabadgelyada ee SNNPRS, wuxuu sheegay in la soo xulay xubno ka socda maamulka cusub ayna bilaabeen wadahadalo ay la yeesheen kooxo kala duwan oo ay ka mid yihiin xubnaha amniga gobolka iyo diinta. ururada bulshada rayidka ah ee ka shaqeeya aaga.
“Waxaan imid magaalada Gununo mudaaharaadna wuu qarxay waddooyinkana waxaa lagu xayraa taayiro gubanaya iyo dhagaxyo,” ayuu yidhi Nebiyu maanta. Sida uu sheegayo kulan ay ka soo qeybgaleen wakiillo ka socda dowladda Federaalka iyo sidoo kale dad caan ah oo uu ka mid yahay ra’iisul wasaarihii hore Hailemariam Desalegn, Guddoomiyihii hore ee Bangiga Qaranka Itoobiya, Tekilewold Atnafu, iyo Guddoomiyihii hore ee Booliiska SNNPRS Fisseha Garedew ayaa lagu qabtay magaalada Sodo. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale goob joog ka ahaa maamulka degmada iyo maamulayaasha magaalada iyo taliyayaasha booliska ee aaga Wolaita waxaana ujeedadiisu ahayd xalinta xaalada. Si kastaba ha noqotee, kulanka wuxuu ku dhammaaday codsi ka yimid wakiillada maxalliga ah ee dowladda federaalka ah si dib loogu soo celiyo dhammaan mas’uuliyiinta aaga [oo la xiray]. “
Intaa waxaa dheer, Nebiyu wuxuu sheegay in kaqeybgaleyaasha maxalliga ah ay u baahan yihiin baaritaan cad oo la xiriira dilkii ugu yaraan 21 qof oo rayid ah gacanta lagu dhigay iyo in la sii daayo daraasiin dad ah oo lagu xiray dibadbaxyadii ka dib iyo sidoo kale ka bixitaankii ciidamada amniga federaalka. laga bilaabo wadooyinka ww. Markii xiisadaha ay soo noqdeen, laba qof oo kale ayaa la rumeysan yahay in lagu toogtay magaalada Gacheno, ayuu yiri.
Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay magaalada Sodo iyo nawaaxigeeda galabnimadii Axadii ka dib markii ay xireen xubno ka tirsan booliska federaalka iyo ciidamada federaalka ugu yaraan 26 qof, oo ay ku jiraan Dagato Kumbe, maamulaha aaga Wolaita. Saraakiisha la qabtay ayaa sidoo kale ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee codsiyada dhalashada Wolaita iyo xubnaha xisbiga mucaaradka ah ee ka socda Dhaqdhaqaaqa Wolaita Qaranka (WNM) intii lagu gudajiray kulan ay ku qabanayeen hoolka shirarka Gutera ee magaalada. Warbixin ay soo saartay maanta, mucaaradka mucaaradka Wolaita People’s Democratic Front (WPDF) ayaa lagu sheegay in tirada dadka lagu diley meelo kala duwan ay gaartay 21; tiro kale ayaa sidoo kale dhaawacmay.
Previous articleRussia oo sheegtey iney soo saareen Dawada corona virus
Next articleDhibtaada Dagaalada Joogtada Noqda!
Dalkii ugu horreeyay caalamka ee mamnuuca isticmaalka magaca Corono Virus.
NISA oo shaacisay in ay qabatay Xubin ka tirsan Al-shabaab